June 1, 2021 - Cele Fans
“လူနာတစ်ဦးကို အသက်ကယ်လိုက်ပြန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်”
June 1, 2021 Cele Fans 0
ပြည်သူတွေကို ဆေးကုသပေးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်က ယနေ့မှာ လူနာတစ်ဦးကိုအသက်ကယ်လိုက်ပြန်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ … “လေဖြတ်ပြီးအာရုံကြောများအလုပ်မလုပ်သလို သတိရတချက်မရတချက်ဖြင့် ခြေလက်များလှုပ်ရှား၍မရသလို ပလက်ကြီးမှတစ်ပါးဘာမှလှုပ်၍ပင်မရနိုင်တော့ဘူး ။ပွေ့ပြီးမလာရသောအဖြစ်မျိုးပါ ။ မျက်လုံး ပါးစပ်များပါလှုပ်၍မရခဲ့ပေ ။ပထမတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်အားစိုးရိမ်မိပြီးငါ့လက်ထဲသေသွားရင်တော့ ငါတော့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးစိုးရိမ်မိတယ် ။သို့သော်လည်းဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ငါရအောင်ကုသပေးမယ်ဆိုပြီး ရတနာသုံးပါး ဝိဇ္ဇာတစ်သိန်းကျော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အနန္တမေတ္တာတော်များဖြင့် ကုသပေးခဲ့ရာ ၆ကြိမ်မြောက်လောက်မှာမသီတာထထိုင်လိုရသလို လမ်းပါထလျှေက်ပြီး စကားများပင်ပြောလာခဲ့သည်ကိုအံ့သြစွာတွေ့ခဲ့ရသလို ပီတိများဖြစ်ကာအလွန်ကြည်နူးဝမ်းသာခဲ့ရလေသည် “လို့ သရုပ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်က သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်စ်မှာရေးသားထားပါတယ်။ ———————- ျပည္သူေတြကို ေဆးကုသေပးေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ထူးခန႔္ေက်ာ္က ယေန႔မွာ လူနာတစ္ဦးကိုအသက္ကယ္လိုက္ျပန္ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ … “ေလျဖတ္ၿပီးအာ႐ုံေၾကာမ်ားအလုပ္မလုပ္သလို […]
တရားမဝင် မြေကွက်ရိုက်ရောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ဘူးဆိုပေမယ့် အမြတ် အရမ်းကျန်ပါတယ်။ ကိုယ်ရောင်းလိုက်တဲ့ မြေကွက်ဟာဈေးသက်သာလွန်းရင်လည်း ဝယ်သူ မယုံကြည်မှာစိုးတာကြောင့် ဝယ်သူယုံကြည်လောက်တဲ့ ဈေးအထိဈေးတင်ပြီး ရောင်းကြရပါတယ်။ အဲ့ဒါကလည်း တရားမဝင်အကွက်ရိုက်ရောင်းတဲ့ ဈေးကွက်အတွက် အမြတ်အစွန်းများစွာကို ရစေပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ တစ်ဧက သိန်း ခုနှစ်ဆယ် ရှစ်ဆယ် တစ်ရာ လောက်နဲ့ ပေးဝယ်ရတဲ့မြေဟာ အိမ်ဝိုင်းကွက်ရိုက်ပြီး ပြန်ရောင်းရင် မြေအနေအထားနဲ့ လမ်းအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ၁၄ ဝိုင်းကနေ ၁၆ ဝိုင်းအထိရတာဆိုတော့ […]
သင် ကားဝယ်တော့မယ်ဆို ဒါလေးအရင် ဖတ်ကြည့်ပါ မျက်မြင် ကား သွားဝယ်မယ့် အမျိုးတွေ အတွေးမမှား ဈေးမများစေဖို့ ဒါလေးဆောင်ထား အကြမ်းအားဖြင့် တော့ မမှားနိုင်တော့ပါ ၁။ ကား ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင် ကောင်းကောင်း ရရှိပြီးအရိပ်အောက်သက်တောင့်သက်သာ ကြည့်နိုင်သောနေရာ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးနေ့လည့်ခင်း နေပူအောက်ကြည့်ရှု့ခြင်းရှောင်ပါအပူဒါဏ် ပြင်းထန်လွန်းသဖြင့်ကားကြည့်ရှုသောအခါတွင်သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်လို့စစ်ရမှာတွေကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ အပူဒါဏ်သက်သာအောင်ဆိုပြီးညနေဘက်နဲ့မိုးချူပ်ပိုင်းတော့ ကား ကြည့်ဖို့မလုပ်ကြပါနဲ့နော်သဘောပေါက်ပါရေထဲ ပိုက်ဆံလွင့်ပြစ်လိုက်ရင်တောင်အသံမြည်ဦးမှာပါ.. ၂။ ကား ကိုတွေ့တာနဲ့ကားထိုင်ခုံခါးပတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါခါးပါတ်ခေါင်းတွေမှာထုတ်တဲ့ ခုနှစ်တွေ အတိအကျရေးထားပါတယ်ဖြဲထားတာမျိုး ၊ကတ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်ထားတာမျိုးမဖြစ်ရပါဘူး ကြည့်တာနဲ့တွေ့ရပါမယ်ကားပိုင်ရှင် […]
ဘဏ်အပ်ငွေတွေ မဆုံးရှုံးစေရဘူး ဘဏ်တွေ မပြိုလဲနိုင်ဘူး ဆိုသော်လည်း
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟိုဘဏ် ဒုဥက္ကဌ ဦးဝင်းသော်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရော၊ သတင်းဌာနတွေနဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံရာမှာပါ ရှင်းတာလင်းတာ လုပ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကြုံနေရတဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေဟာ ဘဏ်တွေကို အခက်အခဲဖြစ်အောင် CDM လုပ္တာကေန စတာဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်း ဘဏ်တွေမှာ ငွေတွေ ဝိုင်းထုတ်ကြ၊ ထုတ်လိုက်ရင် ဒီအစိုးရပြုတ်ကျသွားမယ် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်မှုတွေ Facebook ကေန […]
၂၇ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် တိုက်ရန်
၂၇ ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆု ဖွင့်ပွဲအတွက် စုစုပေါင်းအက္ခရာ အလုံး ၂၀ နှင့် ထီစာအုပ် ၂၆၂၃၃၄ အုပ်သာ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး အထူးဆုကြီးစနစ်တွင် ကျပ်သိန်း ငါးထောင် တစ်ဆုနှင့် ကျပ်သိန်း တစ်ထောင် တစ်ဆုသာ ပါဝင်ကြောင်း အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ၏ မေ ၃၀ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ၂၇ ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲကြီးစတင်နေပါပြီ သိန်း ၅၀၀၀. ဆ ၇၁၃၄၁၈. […]